कार्यकर्ताको फूलमाला ओइलायो, प्रचण्ड धुलो उडाउँदै हुँइंकिबक्स्यो ! « Pathibhar Online
कार्यकर्ताको फूलमाला ओइलायो, प्रचण्ड धुलो उडाउँदै हुँइंकिबक्स्यो !
काठमाडौं । नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सूचना तथा संचार मन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार रहिसकेका र हाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उछित्तो काढेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धमै संलग्न रहेका उनले नेकपा अध्यक्ष दाहाल पछिल्लो पटक २०७६ पुस २१ मा सिन्धुपाल्चोक जाँदा कार्यकर्ताहरुस“ग भेट्दै नभेटी साविक कदमबास गा.वि.स.का पूर्वप्रधानपंच स्व.वीरबहादुर गिरीका छोरा बलराम गिरीको घरमा बसेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा नेता अग्नि सापकोटाले नै अध्यक्ष दाहाललाई पूर्व प्रधानपन्चका छोरा बलरामको घरमा लगेर राखेको कुरासमेत उनले लेखेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोकमा आएको थाहा पाएर उनलाई भेट्न फूलमाला लिएर पुगेका नेकपा कार्यकर्ताहरुलाई बेवास्ता गरिएको कुरा उनले लेखेका छन् । ब्यंग्यात्मक रुपमा उनले नेकपा नेता सापकोटा र अध्यक्ष दाहाललाई ‘आइबक्स्यो’ जस्ता शब्द पनि उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष दाहालले कार्यकर्तालाई नभेटी फर्किएपछि २०७६ पुस २४ मा भारतीले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–‘आकस्मिक खवर सुनियो । प्रचण्ड कमरेड सिन्धुपाल्चोक आउनु भयो । सबै कार्यकताले उत्साहित भएर अग्नि कमरेडलाई फोन गरे । कमरेड प्रचण्ड आउनु भयो ? जवाफ आयो, आइबक्स्यो । तर, तपार्इंहरुलाई हैन, कमरेड मलाई आइबक्स्यो ।
सबै कार्यकता चकित भए । सबैको बुझाईमा प्रचण्ड कमरेड अग्नि कमरेडमा बस्नु भयो ? तर अग्नि कमरेडले प्रचण्डलाई कदम्बासस्थित २५ बर्षे प्रधानपञ्च स्वर्गीय बीरबहादुर गिरी हवेलीमा लगेर राख्नुभयो । कदमबासका जनमोर्चादेखि माओवादीसम्मलाई भोट हालेका र जनयुद्धमा योगदान गरेका कुनै पनि कार्यकर्तालाई हवेलीमा प्रवेश दिएन ।
बिहानै फुलमाला बोकेर हवेली पुगेका शहीद परिवर र सोझा कार्यकता गेटका दुई जर्मनी कुकुर हेरर फर्किए । प्रचण्डलाई भेट्न फुलमाला लिएर बाटोमा बसेका कार्यकतालाई बेवास्ता गर्दै, कच्ची सडकमा धुलो उडाउँदै बिहान सातै बजे प्रचण्ड कमरेड सवारीका गाडीहरु काठमाडौं हुँइंकिए । अनि पुराना कार्यकर्ता शिक्षकले प्रतिक्रिया दिए–अब यो वडामा पनि नेकपा हार्ने संकेत देखियो ।